Ibhotile yeglasi yasePoland
Xuzhou Yanjia Glassware Co., Ltd. kuyinto inkampani mveliso norhwebo elidibanayo uphuhliso, uyilo, imveliso, ukuthengiswa kunye norhwebo. Inkampani yethu yasekwa ngo-Julayi 2009 kwaye kufuneka namasebe 7 kuquka isebe kumazwe angaphandle, isebe yorhwebo basekhaya kunye nesebe yemveliso njalo njalo. Kukho ngaphezu kwama-50 abasebenzi yobungcali yolawulo yobugcisa kunye nomphathi ukuthengiswa inkampani yethu.
Sinikeza iimveliso ngaphezu 2000 neentlobo ikakhulu ziquka iibhotile zeglasi, abade, ezifana neebhotile amafutha omnquma, ibhotile inkcubeko izityalo, zonke iintlobo iibhotile zesiselo, iibhotile zeglasi zewayini, iibhotile zeglasi ubisi, iingqayi zokugcina iglasi ikofu, kwiziphatho, ingqayi yokugcina, iibhotile cosmetie, ubuso cream ingqayi ngoqalo enesiciko, nelezinye iintlobo zonke izinto zokubhala, iziqholo kunye pepper grinder etc.Our iimveliso lithunyelwa eUnited States, eRashiya, Canada, Australia, Vietnam kunye namanye amazwe 100 nemimandla.
Sinelungelo lokuba ngaphandle iimpahla kwaye phantse-10 iminyaka zophuhliso kunye namava nemveliso. Ukubambelela kumgaqo kwishishini neenzuzo macala, siye saba igama elihle phakathi kubathengi bethu ngenxa iinkonzo egqibeleleyo, iimveliso zethu ezisemgangathweni kunye namaxabiso aphantsi.
inkampani yethu isebenzisa ubugcisa bemveliso phambili kunye nobuchwepheshe processing enzulu kwaye nezixhobo uvavanyo phambili kunye nezixhobo, nto leyo akasiniki sibe nako enamandla yophuhliso, kwaye bafumana iziqinisekiso 7 yesizwe kuyilo patent. Umgangatho iimveliso zeglasi sele kulawulwe, nto leyo eye waphumelela khona ukuzithandisa zombini abathengi basekhaya angaphandle. Ngapha koko, siya kuba iqela uyilo ngobuchule yaye bayile iindidi ezintsha Iibhotile kwaye wenze umngundo entsha abathengi ngokweemfuno zabo ngexesha elifutshane. Siphinde anikele zonke iintlobo elicwangcisiweyo processing ngokunzulu iibhotile zeglasi, ezifana frosting, electroplating, ukutshiza, uphawu kunye silkscreen, njl Sinikeza iimveliso ngaphezu 2000 neentlobo ikakhulu ziquka ibhotile yeglasi ezifana neebhotile amafutha omnquma, ibhotile inkcubeko izityalo, zonke iintlobo iibhotile zesiselo, kwiziphatho, ingqayi yokugcina, zokuthambisa iibhotile kunye nazo zonke iintlobo izinto zokubhala enxulumene eksperimenti imichiza efana negilasi kwitoti, njl Ukongeza, thina inkqubo inkonzo egqibeleleyo kwaye singakwazi ukubonelela consignment arhente ezifana nokuthuthwa Motor, uloliwe, izithuthi ulwandle zothutho emoyeni njalo njalo.
Sinako ukuguqula izimvo zakho kwaye imiba ibe imveliso ngokwenene.
Thina nelayini yethu ngemveliso yazo, kwaye ukunika ixabiso kukhuphiswano.
Ukusuka izinto zokwenza imveliso yokugqibela, everystepare kuhlaziywa ngabasebenzi bethu ukuqinisekisa ukuba satification yakho.
Sinako ukuvelisa imveliso ngokusekelwe kuyilo abathengi requirements.Your kunye isampuli bamkelekile.
Siza amalungiselelo yimveliso esisiso, ukuqinisekisa ukuba iimpahla willbe zilungiselelwe kakuhle njengoko imiselwe.
ABU-No.2-1-908, Wanda Plaza, Yunlong District, Xuzhou City